Gọọmenti Anambra Akụkpọsiala Ụfọdụ Ụlọ A Rụrụ Ebe Ezighị Ezi
A sị na ọ na-abụ onye a gwara agwa ma ọ nụghị anụ, o mee emee ọ hụ ahụ. Ka ọ dị taa, gọọmenti steeti Anambra, site n'aka ụlọ ọrụ ya a kpọrọ Anambra State Physical Planning Board (ASPPB) abagidela ịkụkpọsị ụlọ ahịa na ọdụ ahịa dị iche iche a rụnyesìrì n'okpuru eriri ọkụ na ebe ndị ọzọ ekwesighị ekwesi.
Aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ nọrọ ụbọchị Mọndee wee duo mmadụ abụọ n'iyi ọrụ dịka ndị ọkaikpe ukwu na steeti ahụ. Mmemme idu n'iyi ọrụ ahụ bụ nke e mere n'ọgbakọ isi ọchịchị steeti ahụ nwere na mmàlite izu a, bụkwa nke weere ọnọdụ n'obi gọọmenti dị n'Awka.
Aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ ekwenwòóla nkwà ịkwụ ndị ọrụ oyibo steeti ahụ ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụụ, ma kwuo na ọchịchị ya wàtàrà ọgọdọ ime nke ahụ.
A kpọkuola ma dụọ ndị na-akwọ ụgbọala ka ha hie asaa n'anya, ọ kachasị n'oge mmemme ekeresimeesi a, iji belata ihe mberede, ọnwụ ike maọbụ ajọ ọdachi ndị ọzọ.
Òtù Ọrụ Obi Ebere 'Amaka Care Foundation' Akwàdola Ndị Ikedịnobi
Igbo sị na onye na-emepùrú nwaogbenye na-emepùru chi ya. N'ịgbasò nke a, ótù òtù ọrụ obi ebere, a maara dịka 'Apostle Amaka Care Foundation' nọrọ n'isi ngwụcha izuụka gara aga wee nye ihe nkwàdo na onyinye dị iche iche nyégara imirikiti ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nakwa ndị ike dị n'obi, bụ ndị a maara dịka ọlụsị.
Obianọ Eguzobela Òtù Atụmatụ Ọrụ Mmepe Anambra Maka Ahọ Iri Ise Na-Abịa Abịa